Kheyraadka loogu talo galay dadka kayar da'da 12 - Hay'ada Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Adiga kugu saabsan Kheyraadka loogu talagalay dadka kayar 12 sano
Kheyraadka ku yaal boggan ayaa ku habboon wax ka yar 12s. Waxay diiradda saaraan caawinta wiilasha, laakiin gabdhaha ayaa waliba u heli kara inay waxtar leeyihiin.
Haa, waa gebi ahaanba dabiici ah inaad wax ka ogaato galmada, gaar ahaan xilliga qaan-gaarnimada iyo kadib. Si kastaba ha noqotee, nooca galmada ee ka muuqda filimada qaawan ee internetka looguma talagalin inay kaa caawiso inaad hesho aqoonsigaaga galmada dhabta ah. Kaa caawin mayso inaad wax ka barato jacaylka cilaaqaadka galmada, sidoo kale. Taa baddalkeeda ujeeddadeedu waa inay ku kiciso shucuur xoog leh oo adiga kugu dhex jirta oo aad rabto inaad dib ugu noqoto wax badan.
Filimmada qaawan ee internetka waa warshad ganacsi oo qiimaheeda balaayiin rodol ah. Waxay u jirtaa inay kaa iibiso xayeysiin iyo inay kaa ururiso macluumaadka adiga kugu saabsan. Macluumaadkan ayaa markaa laga iibiyaa shirkado kale si faa'iido looga helo. Ma jiraan wax la mid ah bog internet oo bilaash ah. Waxaa jira qatar ku imaaneysa caafimaadkaaga maskaxda iyo jirka iyo horumarka xiriirkaaga. Pornography waxay waxyeello u geysan kartaa hanashada dugsiga waxayna u horseedi kartaa ku lug lahaanshaha dembi ciqaabeed.
Sababta ay walxaha kacsiga galmada u xaddidan yihiin carruurta, qof kasta oo ka hooseeya da'da 18 sano, ma aha inuu kharribo maaweeladaada, laakiin inuu ilaaliyo maskaxdaada waqtiga muhiimka ah ee horumarka galmadaaga. Kaliya maadaama aad si fudud ugusoo hesho sawirada qaawan ee internet-ka, micnaheedu maahan inaysan dhib lahayn ama caawin lahayn.
Sharci cusub oo ku saabsan Dhibaatooyinka Onlineka ayaa waxaa hadda ka doodaya baarlamaanka UK.
“Waxyaabaha aadan ka aqoonin Porn” waxaa lagu horumariyey iyadoo la kaashanayo aabe bare cilmiga sayniska. Waxay ka caawineysaa carruurta, waalidiinta iyo macallimiinta inay noqdaan kuwo aqoon u leh dhibaatooyinka xun ee ka dhalan kara isticmaalka filimada. Cilmiga ku saleysan iyo diin la’aanta, “Waxyaabaha aadan ka ogeyn ku saabsan Porn” wuxuu qeexayaa qaar ka mid ah khaladaadka suurtagalka ah ee isticmaalka sigaarka si fudud oo fudud oo la fahmi karo. Waxay barbar dhigeysaa cunnooyinka qashinka ah iyo kuwa lulataaye, waxayna sharraxaysaa sababta howlahani ay awood ugu leeyihiin inay "tababaraan" maskaxda, oo ay u noqdaan caado aan caafimaad qabin. Tani waxay u oggolaanaysaa dhallin-yarada inay sameeyaan xulashooyin xog-ogaal ah oo ku saabsan dhammaan waxyaabaha balwadda leh iyo nashaadaadka.
“Waxyaabaha aadan ka aqoonin Porn” waa taxane saddex qaybood ah waxaana laga heli karaa YouTube-ka.
Qeybta 1 (9.24)
Qeybta 2 (9.49)
Qeybta 3 (7.29)